China ubuso ezilahlwayo ubuso imaski mveliso kunye nabenzi | Limeng
Izinto ezingafunekiyo zesigqubuthelo sobuso esilahlwayo esinikezelwa ziifektri zemveliso zonyango, ezivelisa izinto zonyango ixesha elide, kwaye umgangatho uqinisekisiwe. Kwaye, isiqinisekiso esifanelekileyo semathiriyeli siyahlangabezana nomgangatho wenkqubo yolawulo lwemfundo ye-EN14683. Ngokukodwa, izinto eziphakathi zinyibilike zivavanywe nge-25 gram kwimitha nganye yesikwere kwaye i-BFE (Ukusebenza kweBacterial Filtration) ingama-99% ngaphezulu, ebonelelwa yiSinopec, ebizwa ngokuba kukunyibilika okungcono e-china. Isigqubuthelo sobuso sinobuso obungaphakathi obuthambileyo nobuntofontofo obunendawo eguqukayo yempumlo kunye ne-loop yendlebe yelastiki ukuze ilungele ngokufanelekileyo Kukho ukuxhathisa okuphantsi kokuphefumla. Isigqumathelo sobuso botyando sikwavavanywa kwaye sanikwa ingxelo yovavanyo ngokuchasene neerosols.
Ubungakanani 17.5cm * 9.5cm
Ukuxhathisa umoya <49Pa / cm²
Ukusebenza kokucoca kwebacteria > 95% yamasuntswana athwalwa ngumoya yi-0.3micron
Indlebe iluphu Tsala Amandla 10N / 10s
Ekwindla nasebusika lixesha apho iintsholongwane zokuphefumla zisebenza ngakumbi. Ungalibali ukugcina imaski yakho kunye nawe ngalo lonke ixesha, njengoko inokuthintela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-95 zentsholongwane.
Nika ingqalelo ukunxiba iimaski
1. Hlamba izandla ngaphambi kokuba unxibe imaski nasemva kokuba uyisusile.
2. Xa unxibe imaski, nikela ingqalelo ngaphambili nasemva, vala impumlo nomlomo, uze ulungelelanise ikliphu yempumlo ukuze ilingane ebusweni.
3. Kunqande ukuchukumisa ngaphakathi nangaphandle kwemaski ngezandla zakho ngexesha lokunxiba. Susa imaski ngokususa intambo kwiziphelo zombini.
4. Ukunxiba iimaski ezininzi akukunyusi ngempumelelo umphumo wokuzikhusela, kodwa kuyonyusa ukuxhathisa ukuphefumla kwaye kunokutshabalalisa ukuqina.
5. Amanyathelo ohlukeneyo anjengokucoca kunye nokubulala iintsholongwane kwiimaski akunakuqinisekisa ukusebenza kweemaski.
6. Iimaski zonyango ezilahlwayo kunye neemaski zoqhaqho ziya kusetyenziswa kuphela ixesha elimiselweyo kwaye aziyi kudlula iiyure eziyi-8 zizonke.Abasebenzi abasesichengeni sokusebenza abafanele basebenzise iimaski ngaphezulu kweeyure ezi-4. Akufanele zisetyenziswe kwakhona.
Okulandelayo: Ibhendi ye-earloop elahlwayo
3 Ply Uphawu Ubuso Imaski
Ezilahlwayo Earloop Face Vuvu
Ezilahlwayo Medical Face Vuvu
Ezilahlwayo zoPhando lobuso
Imaski yobuso yotyando
Icebo lokucoca ulwelo olunyibilikisiweyo-oluPhephezelweyo lelaphu
Isihluzi sonyango Ilaphu elinyibilikisiweyo-eliPhephezelwe ngotyando lobuso obuso